Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 243316 times)
« Reply #380 on: July 25, 2011, 11:13:32 AM »
" အ ရှင် မ ထား ဘူး "
မျက်နှာတွင် ညိုမဲသော ဒဏ်ရာများနှင့် လူတစ်ယောက်သည် အလွန်
ကြီးမားသော သေတ္တာကို မနိုင့်တနိုင် ဆွဲလာသည် ။ မျက်နှာက ဒဏ်
ရာကို ပြကာ မိတ်ဆွေကို ၄င်းက ပြောသည် ။
" င့ါမိန်းမက ငါ့ကို နှိပ်ထည့်လိုက်တာလေ.. "
" ဟုတ်လား... မင်းက ဒါကို သည်းခံနိုင်တာ အံ့ရော.. ငါ့မိန်းမသာ ဆိုရင်
" ငါလည်း ဒီလိုပါပဲ... အခု သေတ္တာထဲမှာ ဘာပါတယ်လို့မင်း ထင်သလဲ "
" မေ့ သွား တယ်.. "
တရားသူကြီးက မေးသည် ။
" ဒီလူကြီးကို မင်းက " ငပေါကြီး " လို့ပြောတယ်နော်... "
" ဏှာဗူးကြီး လို့ လဲ ခင်ဗျား ပြောတယ်.. ဟုတ်သလား.. "
" အဲ့ဒါတော့ ကျနော် ပြောဘို့မေ့သွားပါတယ်.. "
« Reply #381 on: July 25, 2011, 11:23:25 AM »
": ဘာ မှ မ တွေ့ဘူး "
အိမ်နီးချင်းက မေးသည် ။
" ရှင့် ယောင်္ကျားရဲ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေက ဘယ်လိုလဲ.. "
" မေးဖော်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပဲ...၊ ခေါင်းကို ဓါတ်မှန် ရိုက်
ကြည့်တယ်..၊ ကံကောင်းတယ်..၊ ဘာမှ မတွေ့ ဘူးတဲ့"
" က မ္ဘာ ကြီး အ ကြောင်း "
" အဖွား... ကမ္ဘာကြီးက ဘာဖြစ်လို့လည်နေရတာလဲ ဟင် "
" ခွေးကောင်လေး.. နင့်အဖေရဲ့အရက်တွေ ခိုးသောက်ပြန်င်္ပြီ
" မီး အာ မ ခံ "
" ကျနော့်အိမ်ကို မီးအာမခံ ထားချင်တယ်.. ရမလား.. "
" ရပါတယ် ခင်ဗျာ "
" အခု ချက်ချင်းကို အာမခံ ထားချင်တာ ခင်ဗျ.. "
" ရပါတယ်ဗျ.. "
" မြန်မြန်လေး လုပ်ပေးစမ်းပါ.. အိမ်က မီးလောင်နေပြီဗျ "
« Reply #382 on: July 25, 2011, 12:52:05 PM »
" ရှက် စ ရာ မ လို "
" မိတ်ဆွေက ပြဇာတ် မင်းသား ဟုတ်လား...၊ ကျနော်ကတော့ ဘဏ်သူဌေးပါ..
ပြောရမှာတောင် ရှက်တယ်ဗျာ...၊ ပြဇာတ်ရုံ မရောက်တာတောင် ဆယ်နှစ်လောက်
" ရှက်စရာ မလိုပါဘူးဗျာ... ကျနော်လည်း ဘဏ်ကို မရောက်တာ ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီ "
" ဈေး ကြီး တယ် "
စိတ်ရောဂါ ဆရာဝန်က မိမိ ၏ မိတ်ဆွေကို ပြောသည် ။
" ကျနော့်ရဲ့လူနာတစ်ယောက်က သူ့ ဆီက နိုင်ယာဂရာ ရေတံခွန်ကြီးကို ၀ယ်ဖို့ ချည်း
တစ်ချိန်လုံး ပြောနေတယ်ဗျာ.... "
" ဘာခက်လို့ လဲ ၀ယ်လိုက်ပေါ့ဗျ... "
" ဒါပေမဲ့ သူတောင်းတဲ့ ဈေးက များလွန်းနေတယ်... "
« Reply #383 on: July 25, 2011, 01:56:50 PM »
" အ တူ တူ သောက် မှာ ပေ့ါ "
တံခါးခေါက်သံ ကြားသဖြင့် ကိုထိန်ဝင်း တံခါးကို ဖွင့်လိုက်သည် ။
ဘေးအိမ်ခန်းမှ ချာတိတ် ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ ရသည် ။
" မောင်နီ.. မင်း ဒီတစ်ခါ ဘာလိုချင်လို့လဲ.. ဖန်ခွက်ငှားချင်တာလား
ဒါမှ မဟုတ် ပန်းကန်ပြားလား. "
" မဟုတ်ဘူး.. ဖေဖေက ဖေါက်တံ ခဏပေးပါတဲ့.. "
" အေး အေး.. ရမယ်.. မင်းအဖေကို ပြောလိုက် ငါ ခဏနေကြာ လာခဲ့
မယ်လို့ .. "
" ဘာ ကွာ လို့လဲ ":
" ကျနော် မမူးပါဘူး.. သောက်ရုံပဲ သောက်ထားတာ " ဟု ဒရိုင်ဘာက
တရားသူကြီးက ပြုံးပြုံးလေး ပြန်ပြောသည် ။
" ဟုတ်လား..ဒီလိုဆိုရင် စီရင်ချက်ကို ပြင်ပေးရမှာပေ့ါ. ထောင်ဒဏ် ၇ ရက်
အစား တစ်ပါတ် ကျခံစေ.. "
« Reply #384 on: July 25, 2011, 02:12:06 PM »
ရုရှား တပ်မတော် အရာရှိများအကြား ထင်မြင်ချက် ကောက်ခံပွဲ ပြုလုပ်သည် ။
ဗိုလ်ချုပ် တစ်ယောက်ကို မေးသည် ။
" ဗိုလ်မှူးကြီး ဆိုတာ ဘာပါလဲ ခင်ဗျာ "
" အရည်အချင်း မပြည့်သေးတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ပေ့ါ " ဟု ဗိုလ်ချုပ်က တိကျ ပြတ်သား
စွာ ဖြေသည် ။ ဗိုလ်မှူးကြီး တစ်ဦးကို မေးသည် ။
" ဗိုလ်ချုပ် ဆိုတာ ဘာပါလဲ ခင်ဗျာ "
" အကြံကောင်း ဉာဏ်ကောင်း မထွက်တော့တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး ပါ "
" ကြာ လိမ့် မယ် "
" ဒီနေ့ကျမ ယောင်္ကျား ငါးသွားမျှားတယ် .. ဒါကြောင့် ရှင် နဲ့ကျမ
အချိန်အများကြီး ရမယ်... ဒါနဲ့ရှင့် မိန်းမကို ဘယ်လို ပြောပြီး ထွက်
" ငါးသွားမျှားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ် "
« Reply #385 on: July 25, 2011, 02:32:32 PM »
" စ တု တ္ထ မြောက် လူ နာ "
တိုက်ပွဲအတွင်း အမြှောက်သံ ဗုံးသံများကြောင့် စိတ်ချောက်ချားပြီး ကြောင်သလိုလို
ဖြစ်သွားသော တပ်သား သုံးဦးကို လမ်းတွင် လိုအပ်က အကူအညီ ပေးနိုင်ရန်အတွက်
ဒု-ဗိုလ် အဆင့်ရှိ ဆရာဝန်နှင့်အတူ ဆေးရုံသို့စေလွှတ်လိုက်သည် ။ ဒု-ဗိုလ် သည်
တစ်ရက်ကြာလည်း မလာ ၊ နှစ်ရက်ကြာလည်း မလာ ၊ သုံးရက်ကြာလည်း မလာ
ဖြစ်နေသည်နှင့် တပ်ရင်းမှူးက စိုးရိမ်ပြီး ဆေးရုံသို့ဖုန်းဆက်မေးသည် ။ " ဆေးရုံ
သို့ရဲဘော် လူနာ သုံးဦး ရောက်လာပါသလား " ဟု စုံစမ်းသည် ။ ဆေးရုံက ပြန်
" သုံးဦး မဟုတ်ဘူး . လေးဦး ခင်ဗျ "
" ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ "
" တပ်သား သုံးဦးရယ်..သူ့ ကိုယ်သူ ဆရာဝန်ဆိုပြီး ဘ၀င်မြင့် ရောဂါ စွဲကပ်နေတဲ့ ဒု - ဗိုလ်
တစ်ယောက် ရယ်..၊ စုစုပေါင်း လေးယောက် ပါ..၊ ဒု - ဗိုလ်ရဲ့ရောဂါက ကုရတာ အခက်
« Reply #386 on: July 25, 2011, 02:43:28 PM »
" ဘာ လို သ လဲ "
" လူငယ်များ စာကြိုးစားသင့်သည် " ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာစီစာကုံး
ရေးခိုင်ရာ ပီတာလေးက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေသည် ။
" လူတစ်ယောက်သည် စာကို ကြိုးစားလေလေ အသိပညာ တိုးပွားလေလေ
ဖြစ်သည် ။ သိတာ များလေလေ များများ မေ့လေ ဖြစ်သည် ။ များများမေ့
လေလေ သိတာ နည်းလေလေ ဖြစ်သည် ။ သိတာ နည်းလေလေ မေ့တါ
လည်း နည်းလေလေ ဖြစ်သည် ။ မေ့တာ နည်းလေလေ သူသိတာ များလေ
လေ ဖြစ်သည် ။ ထို့ ကြောင့် မေးစရာ ဖြစ်လာသည် ။ " ဘယ့်အတွက် စာ
ကို ကောင်းကောင်း သင်ရမည်နည်း " ဟူ၍ ဖြစ်သည် ။ "
« Reply #387 on: July 25, 2011, 03:10:01 PM »
" ဖူး"
ပူပြင်းလှသော အာဖရိက နိုင်ငံတစ်ခုသို့အလည်ရောက်နေသော အင်္ဂလိပ်လူမျိုး တစ်ဦးသည်
လေဆိပ်သို့အချိန်မီ ရောက်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်သည် ။ ဖြစ်ချင်တော့ ၄င်းကို လိုက်ပို့ ရမည့် ဂျစ်
ကားမှာ ပျက်သွားသည် ။ သို့ ဖြင့် အိမ်ရှင်များက ကုလားအုပ်စီး၍ သွားရန် အကြံပေး ကြသည်။
" မဖြစ်ဘူးထင်တယ်.. ကျနော်မှ ကူလားအုပ် မစီးတတ်ပဲ.. "
" လွယ်ပါတယ်..သူ့ ကျောပေါ် တက်ထိ်ုင်ပြီး " ဖူး " လို့ ပြောလိုက်ရင် ကူလားအုပ် စသွားလိမ့်မယ်
" ဖူး ဖူး " လို့ ပြောလိုက်ရင် ပိုပြီး မြန်မြန် သွားပါလိမ့်မယ်.. "
တစ်ခြား နည်းလမ်းလည်း မရှိတော့သဖြင့် ကုလားအုပ်ပေါ် အင်္ဂလိပ် တက်ထိုင်သည် ။
" သူ့ ကို ရပ်စေချင်ရင် ဘာပြောရမလဲ.. "
" အာမင် လို့ပြောလိုက်ပါ "
( အာမင် .. ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ ဘုရားရှိခိုး အပြီး နောက်ဆုံး ပြောသော စကား )
အင်္ဂလိပ်ကြီး ခရီး စထွက်သည် ။ " ဖူး ဖူး " ဟု ပြောရာ ကုလားအုပ်သည် အရှိန်ကို မြှင့်လိုက်
သည် ။ မကြာမီ အလွန်နက်စောက်သော ချောက်ကမ်းပါး တစ်ခုဆီ နီးကပ်လာနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း
အင်္ဂလိပ်ကြီး မြင်လိုက်ရသည် ။ ၄င်းမှာ အလွန်တရာ တုန်လှုပ် ချောက်ချားသွားသည် ။ အကြောက်
တရား ဖိစီးသဖြင့် ကုလားအုပ်ကို ရပ်ခိုင်းသည့် စကားလုံးကိုပါ မေ့သွားသည် ။ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ
သဖြင့် ဘုရားစာ ရွတ်သည် ။ ကုလားအုပ်ကား အရှိန်ဖြင့် ဆက်သွားမြဲ..၊ ချောက်ကမ်းပါးနှင့် နီးသ
ထက် နီးလာသည် ။ အင်္ဂလိပ်ကြီးသည် မျက်စိကို စုံမှိတ်ကာ ဘုရားစာကို ဆက်ရွတ်သည် ။ ဘုရား
စာ ဆုံးသောအခါ ထုံးစံအတိုင်း " အာမင် " ဟု ရေရွတ်လိုက်သည် ။ ကုလားအုပ်သည် ချက်ချင်း
ရပ်တန့်သွားသည် ။ မျက်စိကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါ မိမိတို့ သည် ချောက်၏ အစွန်အဖျားသို့ 
ရောက်နေပြီး နောက် တစ်လှမ်း လှမ်းလိုက်လျှင်ပင် ချောက်ထဲ ကျတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ လိုက်ရ
သည် ။ အင်္ဂလိပ်ကြီး စိတ်သက်သာရာ ရသွားသည် ။ နဖူးပေါ်မှ ချွေးများကို သုတ်ရင်း သက်ပြင်းကို
" ဖူး "
« Reply #388 on: July 25, 2011, 03:22:31 PM »
" အ တူ တူ မ သွား ချင် ဘူး "
တရားဟောပြီးသောအခါ ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးက မေးသည် ။
" ဘယ်သူ နိဗ္ဗာန်ကို သွားချင်ကြသလဲ.. "
အဖိုးကြီးတစ်ယောက်က လွဲ၍ အားလုံး မတ်တပ်ရပ်ကာ သွားလိုကြောင်း ဆန္ဒပြု
ကြသည် ။ ဘုန်းကြီးက အံ့သြဟန်ဖြင့် မေးသည် ။
" မစ္စတာ စမစ် ...နိဗ္ဗာန်ကို မရောက်ချင်ဘူးလား "
" ရောက်ချင်ပါတယ်....ဒါပေမဲ့ လမ်းကြုံလိုက်မဲ့ ဒီလူတွေနဲ့အတူတူ မသွားချင်ဘူး "
" ဒါ့ ကြောင့် ကိုး "
သမိုင်း ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားနေသည် ။
" အမိ နိုင်ငံတော် အတွက် ဆိုရင် တို့ ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင် တွေဟာ ကိုယ့်မိန်းမတွေကို
စစ်နိုင်သူ တိုင်းတစ်ပါသား လက်ထဲ ထိုးအပ်ဘို့ဝန်မလေးခဲ့ကြဘူးကွဲ့"
အတန်းထဲမှ တစ်ယောက်က မိမိ၏ ထင်မြင်ချက်ကို ပြောသည် ။
" အခုမှ သဘောပေါက်တော့တယ်... .ဒါကြောင့် စစ်နိုင်တဲ့သူတွေ ခဏလေးနဲ့ပြန်ပြေး
« Reply #389 on: July 26, 2011, 10:15:14 AM »
" ခင် ဗျား သ တိ ထား "
မိန်းမဖြစ်သူ၏ တိတ်တိတ်ပုန်း ယောင်္ကျား သုံးယောက်တိတိကို သ၀န်တိုစိတ်ဖြင့်
သတ်ဖြတ်ခဲ့သူကို သတင်းထောက်က အင်တာဗျူး လုပ်နေသည် ။ အင်တာဗျူးကို
ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်က တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် ပြသ သည် ။
" ခင်ဗျား မိန်းမရဲ့တိတ်တိတ်ပုန်း ယောင်္ကျားတွေကို ခင်ဗျား မသတ်တော့ဘူးလို့ 
အခိုင်အမာ ပြောရဲသလား "
" မပြောနိုင်ဘူး...နောက်လင်ငယ်ကို နောက်နည်းတစ်မျိုးနဲ့ကျုပ် သတ်မယ်လို့စိတ်
ကူးတယ်.. ဒါမှ.. နောင်ကြဉ် ကြရအောင် .. "
" သတ်နည်း အသစ်ကို လျှို့ ဝှက်ချက် မဟုတ်ရင် ပြောပြပါလား... "
" လျှို့ ဝှက်ချက် မဟုတ်ပါဘူး.. ကျုပ်က လျှပ်စစ်လုပ်သား မဟုတ်လား..... အဲ့ဒီတော့
ကြာကူရီသမားကို ဗို့ အားများတဲ့ လျှပ်စစ်ကြိုးတွေပေါ် ပစ်ချမယ်...."
" အကယ်၍ ခင်ဗျား မိန်းမမှာ နောက်ထပ် လင်ငယ် မရှိတော့ဘူး ဆိုရင်ကော "
" ဘာဖြစ်လို့မရှိရမှာလဲ....အခုကို နောက်လူ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ကျုပ် သိနေပြီ..ဒီငနဲ
ရဲ့ဝန်ထမ်းကတ်ပြားကို ကျုပ်မိန်းမရဲ့မှန်တင်ခုံပေါ်က တွေ့ ခဲ့တယ်လေ.. ဒါပေမဲ့
ပြဿနာ တစ်ခုတော့ ပေါ်နေတယ်.. "
" ဘာပါလိမ့် "
" ကျုပ်တို့အမေးအဖြေကို တိုက်ရိုက် လွှင့်နေတယ်နော် "
" ဟုတ်ကဲ့... တိုက်ရိုက် လွှင့်နေပါတယ်.. "
" ပြဿနာကတော့ ကတ်ပြားမှာ ကပ်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံက ခင်ဗျားရဲ့ပုံပဲ "